मुक्ति को आश्वासन - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > मुक्तिको आश्वासन
बाइबलले पुष्टि गर्दछ कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैले मुक्ति पाउनेछन् र कुनै पनि कुराले तिनीहरूलाई ख्रीष्टको हातबाट टाढा फाल्नेछैन। बाइबलले प्रभुको असीम निष्ठा र हाम्रो मुक्तिको लागि येशू ख्रीष्टको पूर्णतामा जोड दिन्छ। यसबाहेक, उनी सबै मानिसहरूका लागि परमेश्वरमा रहेको अनन्त प्रेममा जोड दिइन् र सुसमाचारलाई विश्वास गर्ने सबैको मुक्तिको लागि परमेश्वरको शक्ति हो भनेर वर्णन गर्छिन्। मुक्तिको यस आश्वासनको अधिकारमा, विश्वासीलाई विश्वासमा दृढ रहन र हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्न भनिएको छ। (यूहन्ना १०: २ 10,27-२29; २ कोरिन्थी १: २०-२२; २ तिमोथी १:;; १ कोरिन्थी १ 2: २; हिब्रू:: -1,20--22; यूहन्ना :2:१:1,9; रोमी १:१:1; हिब्रू) , १;; २ पत्रुस :15,2:१:6,4)
"अनन्त सुरक्षा" को बारेमा के हुन्छ?
"अनन्त सुरक्षा" को सिद्धान्तलाई ईश्वरशास्त्रीय भाषामा "सन्तहरूको लगनशीलता" भनिएको छ। सामान्य प्रयोगमा यो "एक पटक मुक्ति पाएको, सँधै मुक्ति पाएको" वा "एक पटक इसाई, सँधै एक इसाई" भन्ने वाक्यांशको साथ वर्णन गरिएको छ।
धेरै शास्त्रपदहरूले हामीलाई निश्चित गर्दछ कि हामीसँग पहिले नै मुक्ति छ, यद्यपि हामीले अन्तको अनन्त जीवन र परमेश्वरको राज्यको लागि पुनरुत्थानको लागि पर्खनु पर्दछ। यहाँ नयाँ नियमले प्रयोग गरेका केही सर्तहरू छन्:
जसले विश्वास गर्दछ अनन्त जीवन छ (यूहन्ना ::४)) ... जसले पुत्रलाई देख्दछ र उसमा विश्वास गर्दछ उसले अनन्त जीवन पाउँछ; र म उसलाई अन्तिम दिन मा उठाउनेछु (यूहन्ना ::४०) ... र म उनीहरुलाई अनन्त जीवन दिन्छु, र उनीहरु कहिल्यै नष्ट हुनेछैनन्, र कोहि पनि उनीहरुलाई मेरो हात बाट खोसेनन् (यूहन्ना १०:२))। तेसैले अब ख्रीष्ट येशू मा जो को लागी कुनै निन्दा छैन (रोमी:: १) ... [केहि] हामीलाई परमेश्वरको प्रेम बाट ख्रीष्ट येशूमा हाम्रा प्रभु (रोमी:: ३)) बाट अलग गर्न सक्नुहुन्न ... [ख्रीष्टले] तपाइँलाई अन्त्यसम्म छिटो प्राप्त गर्नुहुनेछ (१ कोरिन्थी १,6,47) ... तर भगवान वफादार हुनुहुन्छ, जसले तपाइँलाई तपाइँको शक्ति भन्दा बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न (१ कोरिन्थी १०:१३) ... तपाइँ मा राम्रो काम शुरू गर्नुभयो, उहाँले यो पनि समाप्त गर्नुहुनेछ (फिलिप्पी १,6,40) ... हामी जान्दछौं कि हामी मृत्यु बाट जीवन मा आये (१ यूहन्ना ३:१४)।
अनन्त सुरक्षा सिद्धान्त त्यस्ता आश्वासनहरूमा आधारित छ। तर त्यहाँ मुक्ति सम्बन्धी अर्को पक्ष पनि छ। त्यहाँ इसाईहरू पनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट खस्न सक्छ भनेर चेतावनीहरू भएको देखिन्छ।
ईसाईहरुलाई चेतावनी दिइएको छ: "यसैले, जो कोहि सोच्दछ कि ऊ उभिन्छ, उसलाई नदेखाऊ" (१ कोरिन्थी १०:१२)। येशूले भन्नुभयो: "हेर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाइँ प्रलोभनमा पर्नुहुन्न!" (मार्क १४:२)), र "प्रेम धेरै मा चिसो बढ्नेछ" (मत्ती २४:१२)। प्रेरित पावलले लेखे कि चर्चमा कोहि “विश्वासमा
जहाज भत्किएको छ »(१ तिमोथी १: १)। एफिससको चर्चलाई चेतावनी दिइएको थियो कि ख्रीष्टले यसको मैनबत्ती हटाउनुहुनेछ र उसको मुखबाट न्यानो लाउडिसियन थुक्नुहुनेछ। हिब्रू 1: 1,19-10,26 मा चेतावनी विशेष गरी भयानक छ:
«किनकि सत्यको ज्ञान पाइसकेपछि यदि हामीले जानाजानी पाप गर्यौं भने, अब हामी आफ्ना पापहरूको लागि अर्को शिकार हुनेछैनौं, तर न्यायको भय terrible्कर पर्खाइ र विरोधीहरूले नाश गर्ने लोभी आगोबाहेक अरू केहि हुँदैन। यदि कसैले मोशाको व्यवस्था उल्ल .्घन गरेको छ भने उसले दुई वा तीन साक्षीहरूको लागि निर्दयी भएर मर्नु पर्छ। परमेश्वरको पुत्रलाई कुल्चीमिल्ची गर्ने र करारको रगतलाई अशुद्ध ठान्ने, जसद्वारा उनी पवित्र पारिएका थिए र अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गर्नेहरू कत्ति कठोर सजायको सोच्दछन्? किनभने हामी उहाँलाई चिन्छौं जसले यसो भनेका थिए: 'बदला लिने काम मेरो हो, म बदला फेर्न चाहन्छु र फेरि: परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई न्याय गर्नुहुनेछ।' जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो छ।
हिब्रू:: -6,4- also ले हामीलाई विचार गर्नुपर्ने कारण पनि दिन्छ:
«किनकि ती व्यक्तिहरू जो एकपटक ज्ञानी र चाखिएका थिए, स्वर्गको वरदान दिएका थिए र पवित्र आत्मामा भाग लिएका थिए र परमेश्वरको वचन र भावी संसारको शक्तिको स्वाद लिएका थिए र पछि पसेका थिए, तिनीहरूलाई फेरि पश्चाताप गर्न नवीकरण गर्न। किनभने उनीहरूले फेरि परमेश्वरको पुत्रलाई क्रूसमा टाँगेका छन् र यसको उपहास गर्छन्।
त्यसैले नयाँ नियममा द्वैद्व छ। धेरै पदहरू हामीसँग ख्रीष्टमा भएको अनन्त मुक्तिको बारेमा सकारात्मक छन्। यो मुक्ति निश्चित लाग्छ। तर त्यस्ता पदहरू केही चेतावनीले कमजोर बनाइदिएका छन जुन ती इसाईहरूले निरन्तर अविश्वासद्वारा मुक्ति गुमाउन सक्छ भनेर देखा पर्दछ।
किनकि अनन्त मुक्तिको सवाल वा इसाईहरू सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न हो - कि उनीहरूले एक पटक मुक्ति पाएपछि उनीहरू जहिले पनि मुक्ति पाउँछन् - सामान्यतया हिब्रू १०: २ 10,26--31१ जस्ता शास्त्रपदहरूको कारण खडा भएको हामी यस खण्डलाई नजिकबाट हेर्नेछौं। प्रश्न यो छ कि हामीले यी पदहरूको कसरी व्याख्या गर्नुपर्दछ। लेखक कसलाई लेख्छन्, र जनताको "अविश्वास" को प्रकृति के हो र उनीहरूले केलाई ग्रहण गरेका छन्?
सर्वप्रथम, हिब्रू भाषामा सन्देशलाई समग्रमा हेरौं। यो पुस्तक को मुटु मा पाप को लागी पूर्ण बलिदान को रूप मा ख्रीष्ट मा विश्वास गर्न को लागी आवश्यकता छ। त्यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धी छैनन्। विश्वास उहाँमा एक्लो हुनु पर्छ। उद्धार को सम्भावित हानि को प्रश्न को स्पष्टीकरण जुन पद २ causes यस अध्याय को अन्तिम पद मा निहित छ: "हामी पछि हट्ने र निन्दा गरिएकाहरु को होइनौं, तर विश्वास गर्ने र आत्मा लाई बचाउनेहरु को" (v। २))। कोही पछाडि हट्छन्, तर जो ख्रीष्टमा रहन्छन् हराउन सक्दैनन्।
विश्वासीहरु को लागी एउटै आश्वासन हिब्रू 10,26:19 भन्दा पहिले पदहरुमा पाईन्छ। ईसाईहरु लाई विश्वास छ कि उनीहरु येशू को रगत बाट भगवान को उपस्थिति मा छन् (v। १)। हामी पूर्ण विश्वास मा भगवान संग सम्पर्क गर्न सक्छौं (v। २२)। लेखकले निम्न शब्दहरुमा ईसाईहरुलाई आग्रह गर्दछन्: "हामी आशा को पेशा मा पकड र नडराऊ; उहाँ वफादार हुनुहुन्छ जसले उनीहरुलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो (पद २३)।
हिब्रू -6-१० मा "पतन" को बारे मा यी पदहरु लाई बुझ्न को लागी एक तरीका हो कि उनीहरु लाई आफ्नो विश्वास मा दृढ रहन को लागी प्रोत्साहित गर्न काल्पनिक परिदृश्यहरु दिनुहोस्। उदाहरण को लागी, हिब्रू 10: 10,19-39 लाई हेरौं। ती मानिसहरु जससँग उनी बोल्छन् ख्रीष्टको माध्यमबाट "पवित्रस्थानमा प्रवेश गर्ने स्वतन्त्रता" (पद १)) छन्। उनीहरु "भगवानको नजिक आउन" (v। २२)। लेखकले यी मानिसहरुलाई "आशा को स्वीकारोक्ति को लागी दृढ धारण" (v। २३) को रूप मा देख्छन्। उहाँ उनीहरुलाई अझ धेरै माया र ठूलो विश्वास (v। २४) को लागी उत्तेजित गर्न चाहानुहुन्छ।
यो प्रोत्साहन को भाग को रूप मा, उनीहरु लाई के हुन सक्छ को एक तस्वीर कोर्छन् - काल्पनिक रूपमा उल्लेख गरिएको सिद्धान्त अनुसार - जो "जानबूझेर पाप मा दृढ रहन्छ" (v। २))। तैपनि, उहाँलाई सम्बोधन गर्ने मानिसहरु ती हुन् जो "प्रबुद्ध" थिए र जो सतावट को समयमा वफादार रहे (vv। ३२-३३)। तिनीहरूले ख्रीष्ट मा आफ्नो "भरोसा" राखेका छन्, र लेखक उनीहरुलाई विश्वास मा दृढ रहन को लागी प्रोत्साहित गर्दछ (vv। ३५-३26)। अन्तमा, ती मानिसहरु जसको लागी उनी लेख्छन्, उनी भन्छन् कि हामी पछि हट्ने र निन्दा गर्नेहरु को होइनौं, तर विश्वास गर्ने र आत्मा बचाउनेहरु को हौं "(पद ३)।
ध्यान दिनुहोस् कि कसरी लेखक हिब्रू 6,1: 8-9 मा "धर्मत्याग" को बारे मा आफ्नो चेतावनी समाप्त गर्दछ: "यद्यपि हामी यस तरीकाले बोल्छौं, प्रियहरु, हामी विश्वस्त छौं कि तपाइँ अझ राम्रो हुनुहुन्छ र तपाइँ मुक्ति पाउनुहुनेछ। किनकि भगवान अन्यायी हुनुहुन्न कि उसले तपाइँको काम र मायालाई बिर्सनु पर्छ जुन तपाईले उहाँको नाममा देखाउनुभयो र अझै पनी संतहरुको सेवा गरीरहनुभएको छ "(vv। 10-11)। लेखक यसो भन्दै जान्छन् कि उनले उनीहरुलाई यी कुराहरु भने ताकि उनीहरु "अन्त्यसम्मको आशामा समात्ने एउटै जोस देखाउन सकुन्" (पद ११)।
त्यसकारण येशूमा साँचो विश्वास भएको व्यक्तिले गुमाउन सक्ने अवस्थाको कुरा गर्न अनुमान गरिएको छ। तर यदि यो सम्भव थिएन भने, के चेतावनी उपयुक्त र प्रभावकारी हुनेछ?
के ईसाईहरु लाई वास्तविक संसार मा विश्वास हराउन सक्छ? ईसाईहरु पाप गर्न को अर्थ मा "टाढा" गर्न सक्छन् (१ यूहन्ना १: -1-२: २)। तपाइँ केहि परिस्थितिहरुमा आध्यात्मिक ढिलो हुन सक्नुहुन्छ। तर के यो कहिले काहिँ ख्रीष्ट मा साँचो बिश्वास गर्नेहरु को लागी "धर्मत्याग" को लागी नेतृत्व गर्दछ? यो धर्मशास्त्र बाट पुरा तरिकाले स्पष्ट छैन। वास्तवमा, हामी सोध्न सक्छौं कि कसरी एक ख्रीष्ट मा "वास्तविक" हुन सक्छ र एकै समयमा "पतन"।
चर्चको धारणा, ती धारणाहरुमा यो पनि भनिएको छ कि परमेश्वरले ख्रीष्टलाई दिनुहुने विश्वासमा चिरस्थायी विश्वास गर्ने मानिस कहिल्यै उसको हातबाट फुट्न सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, जब कुनै व्यक्तिको विश्वास ख्रीष्टमा केन्द्रित हुन्छ, ऊ हराउन सक्दैन। जबसम्म इसाईहरूले यस आशंका व्यक्त गर्छन् तब सम्म उनीहरूको मुक्ति निश्चित हुन्छ।
"एक पटक मुक्ति पाएको, सँधै मुक्ति पाएको" भन्ने धारणाको प्रश्नले हामी ख्रीष्टमा विश्वास गुमाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने सम्बन्धमा छ। माथि उल्लेख गरिएझैं हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बयान गरिएको छ जुनसँग कम से कम प्रारम्भिक "विश्वास" थियो तर जसले यसलाई गुमाउने खतरामा पर्न सक्दछ।
तर यसले हामीले अघिल्लो अनुच्छेदमा बनाएको विन्दुलाई प्रमाणित गर्दछ। मुक्ति गुमाउने एकमात्र तरीका भनेको मुक्तिको एकमात्र तरीकालाई अस्वीकार गर्नु हो - येशू ख्रीष्टमा विश्वास।
हिब्रूहरु को लागी पत्र मुख्य रूप मा भगवान को छुटकारा को काम मा अविश्वास को पाप को बारे मा छ, जो उहाँले येशू ख्रीष्ट को माध्यम बाट पूरा गर्नुभयो (जस्तै हिब्रू १: २; २: १-४; ३:१२, १४; ३: १ -1,2 -४: 2,1; 4, 3,12)। हिब्रू अध्याय १० नाटकीय रूपमा पद १ in मा यो मुद्दालाई सम्बोधन, येशू ख्रीष्ट को माध्यम बाट हामी स्वतन्त्रता र पूर्ण विश्वास छ भन्दै।
पद २ ले हामीलाई हाम्रो आशाको स्वीकारोक्तिमा रहन आग्रह गर्दछ। हामी निश्चित रूपमा निम्न कुरा जान्दछौं: जबसम्म हामी हाम्रो आशाको कन्फरेसनमा होल्ड गर्दछौं, हामी निश्चित छौं र हाम्रो उद्धार गुमाउन सक्दैनौं। यस पापमा हाम्रो पापको निम्ति ख्रीष्टको मिलाप, उहाँमा नयाँ जीवनको लागि हाम्रो आशा र यस जीवनमा उहाँप्रतिको हाम्रो निरंतर वफादारीमा हाम्रो विश्वास समावेश छ।
यो "एक पटक बचत भएको, सँधै बचत गरिएको" नारा प्रयोग गरेर उनीहरूले के भन्न खोज्छन् भनेर प्रायः स्पष्ट हुँदैन। यस शब्दको अर्थ यो होइन कि कुनै व्यक्तिले मुक्ति पाएको कारण उसले ख्रीष्टको बारेमा केहि शब्दहरू भने। यदि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाएका छन् भने उनीहरू मुक्ति पाउनेछन्, यदि तिनीहरू ख्रीष्टमा नयाँ जीवनमा नयाँ गरी जन्मेका भए। साँचो विश्वास ख्रीष्टप्रति वफादारिताद्वारा प्रदर्शित हुन्छ, यसको मतलब हो कि हामी अब आफ्नै लागि बाँच्दैनौं तर मुक्तिदाताको लागि।
तल्लो रेखा यो हो कि जब सम्म हामी येशु मा बाँच्न को लागी जारी रहन्छौं, हामी ख्रीष्ट मा सुरक्षित छौं (हिब्रू १०: १ -10,19 -२३)। हामी उहाँमा विश्वासको पूर्ण आश्वासन छ किनकि यो उहाँ हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। हामी चिन्ता र प्रश्न सोध्न छैन। "के म यो गर्न सक्षम हुनेछु?" ख्रीष्टमा हामी सुरक्षित छौं - हामी उहाँकै हौं र मुक्ति पाएका छौं, र केहि पनि हामीलाई उहाँको हातबाट टाढा गर्न सक्दैन।
हामी हराउन सक्ने एकमात्र तरीका भनेको उहाँको रगत कुल्चीनु र निर्णय गर्नु हो कि अन्तमा हामीलाई उसको आवश्यक पर्दैन र हामी आफ्नै लागि पर्याप्त छौं। यदि त्यसो हो भने, हामी जे भए पनि आफूलाई बचाउने बारेमा चिन्तित हुँदैनौं। जबसम्म हामी येशूमा विश्वासयोग्य रहन्छौं, हामीमा यो आश्वासन छ कि उहाँले हामीमा सुरु गर्नुभएको काम उहाँले पूरा गर्नुहुनेछ।
सान्त्वनाको कुरा यो हो: हामीले हाम्रो उद्धारको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन र भन्ने गर्छौं, "यदि असफल भएँ भने के हुन्छ?" हामी पहिले नै असफल भइसकेका छौं। यो येशू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बचाउनुहुन्छ र ऊ असफल हुँदैन। के हामी यसलाई स्वीकार गर्न असफल हुन सक्छौं? हो, तर आत्माको अगुवाईमा रहेका मसीहीहरूको हैसियतमा हामी यसलाई स्वीकार्न असफल भएका छैनौं। येशूलाई एकचोटि स्वीकार गरेपछि पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ, जसले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बदल्नुहुन्छ। हामी खुशी छौं, डराएनौं। हामी शान्तिमा छौं, डराउनुपर्दैन।
यदि हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौं भने हामी चिन्ता गर्न बन्द गर्छौं कि हामी "यो गर्न सक्छौं"। उसले हाम्रो लागि "बनायो"। हामी यसमा आराम गर्छौं। हामी चिन्ता गर्न छाड्छौं। हामी उहाँमा विश्वास र विश्वास गर्छौं, आफैमा होइन। तसर्थ, हामीले हाम्रो मुक्ति गुमाउन सक्छौं कि भन्ने सवालले अब हामीलाई दुःख दिँदैन। किन? किनकि हामी विश्वास गर्दछौं कि क्रूसमा येशूको काम र उहाँको पुनरुत्थान हामीलाई चाहिने सबै हो।
भगवानलाई हाम्रो सिद्धताको आवश्यकता छैन। हामीलाई उसको आवश्यक छ, र उनले हामीलाई ख्रीष्टमा विश्वास गरेर यो सित्तैंको उपहारको रूपमा दिए। हामी असफल हुने छैनौं किनकि हाम्रो मुक्ति हामीमा निर्भर हुँदैन।
सारांशमा भन्नुपर्दा, चर्चले विश्वास गर्दछ कि जो ख्रीष्टमा रहन्छन् तिनीहरू हराउन सक्दैनन्। तपाईं "सदाका लागि सुरक्षित" हुनुहुन्छ। तर यो निर्भर गर्दछ कि मानिसहरू "जब एक पटक बचत भयो, जहिले पनि बचत भयो" भन्नुको मतलब के हो।
जहाँसम्म पूर्वनिर्धारणको सिद्धान्तको सवाल हो, हामी केही शब्दहरूमा चर्चको स्थितिलाई सारांशमा वर्णन गर्न सक्छौं। हामी विश्वास गर्दैनौं कि कसले हराउनेछ र कसले खोल्दैन भन्ने कुरा भगवानले सधैं दृढ निश्चय गरिसकेका छौं। यो चर्चको धारणा हो कि परमेश्वरले यस जीवनमा सुसमाचार ग्रहण नगर्ने सबैका लागि उचित र उचित प्रबन्ध गर्नुहुनेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्याय हामी जस्तै गरी हुनेछ, त्यो हो कि तिनीहरूले आफ्नो विश्वास र येशू ख्रीष्टमा विश्वास राख्छन् कि।